U dalxiis Sacuudi Carabiya Dalxiis haddii lagu Talaalay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Daalacanayo Hadda » U dalxiis Sacuudi Carabiya Dalxiis haddii lagu Talaalay
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Raaxada • News • Waajib ah • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Sacuudi Carabiya waxay dib u furi doontaa xuduudaheeda dalxiisayaasha caalamiga ah laga bilaabo 1 Ogosto 2021. Dadka soo booqda 49 dal waxay awoodi doonaan inay sahamiyaan Boqortooyada Sacuudi Carabiya, haddii si buuxda loo tallaalo.
Sacuudi Carabiya ayaa fududeysay xannibaadaha xadka ka dib xannibaadda caalamiga ah ee COVID-19.
Muwaadiniinta ka yimid 49 dal ayaa xaq u leh fiisaha dal-ku-galka ee dalxiiska.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa Boqortooyada ugu hambalyeysay furitaanka albaabada ay u furtay dunida dalxiiska caalamiga ah.
Sacuudi Carabiya ayaa hadda balaayiin ku maalgelineysa warshadaha safarka iyo dalxiiska, kaliya uma ahan Sacuudi Carabiya laakiin waxay noqon doontaa xarun caalami ah oo hoggaamiyeyaasha dalxiiska adduunka ay isugu yimaadaan oo dejiyaan isbeddellada.
Laga bilaabo 1da Ogosto, maalgashigani wuxuu bilaabi doonaa inuu mar labaad dakhli u abuuro Boqortooyada, marka muwaadiniinta 49 dal lagu casuumo inay soo booqdaan adduun cusub.
Doodo dhaweyd oo ay abaabuleen daabicitaankan iyo Cutubka Sacuudi Carabiya ee Shabakadda Dalxiiska Adduunka, waxaa la tilmaamay: Sacuudi Carabiya waxay leedahay qorshooyin waaweyn iyo xisaab ay horeyba ugu jirtay guulo waa weyn oo aan Boqortooyada oo kaliya la gelin xarunta aduunka ee dalxiiska laakiin loo abuuro goob run ah oo ay isugu yimaadaan kuwa hogaamiya dalxiiska adduunka.
Mudane Cabdalla Casiis Bin Naser Al Saud, Guddoomiyaha WTN Qeybta Sacuudi Carabiya, ayaa tilmaamay in Sacuudi Carabiya ay martigeliso ururada waaweyn ee socdaalka iyo dalxiiska iyo hindisayaal, oo ay ku jiraan Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO), Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC), iyo Xarunta Adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka (GTRCMC).
Xaaladda: Booqdayaasha doonaya inay u safraan Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay u baahan yihiin in si buuxda loo tallaalo.
Dadka haysta fiisaha dalxiiska ee si buuxda uga tallaalaya COVID-19 waxay awoodi doonaan inay soo galaan waddanka laga bilaabo 1da Ogos, 2021, iyadoon loo baahnayn in la karantiilo. Socotadu waxay u baahan doonaan inay bixiyaan caddayn koorso buuxda oo ka mid ah 4 tallaal oo hadda la aqoonsan yahay: 2 qiyaasood oo ah tallaallada Oxford/Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech, ama Moderna ama hal qiyaas tallaal ah oo ay soo saareen Johnson & Johnson.
Dadka socotada ah ee dhammaystay laba qiyaasood oo ah tallaallada Sinopharm ama Sinovac waa la aqbali doonaa haddii ay heleen qaddar dheeraad ah mid ka mid ah 4 tallaal oo Boqortooyada lagu oggolaaday.
Sacuudi Carabiya ayaa furtay bogga internetka ee https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home si booqdayaashu u diiwaangeliyaan heerka tallaalkooda. Goobta waxaa lagu heli karaa Carabi iyo Ingiriis.
Si loo soo dhoweeyo dadka socotada ah, Sacuudigu wuxuu casriyeeyay Tawakkalna, oo ah waddada abaal-marinta ee waddanka, iyo raad-raac app, si loogu oggolaado booqdayaasha ku-meel-gaarka ah inay iska diiwaangeliyaan faahfaahinta baasaboorkooda. Tawwakalna waxaa looga baahan yahay galitaanka goobo badan oo dadweyne oo ku yaal Sacuudi Carabiya, oo ay ku jiraan suuqyada laga dukaameysto, shineemooyinka, maqaayadaha, iyo goobaha madadaalada.
Ku dhawaaqitaanku wuxuu imanayaa ku dhowaad siddeed iyo toban bilood ka dib markii dalxiiskii caalamiga ahaa ee Sacuudi Carabiya la joojiyay sababo la xiriira cudurka faafa ee COVID-19. Sacuudi Carabiya waxay billowday barnaamijka fiisaha e-fiisaha dalxiiska bishii Sebtember 2019.
"Saudi waxay rajeyneysaa inay dib u furto albaabadeeda iyo qalbiyadeeda martida caalamiga ah," ayuu yiri Fahd Hamidaddin, oo ah madaxa Hay'ada Dalxiiska Sacuudiga (STA). “Intii lagu jiray xiritaanka, waxaan si wadashaqeyn dhow ah ula shaqeynaynay la -hawlgalayaasheena qaybta dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay si loo hubiyo in booqdayaasha Sacuudiyiinta ay ku raaxeysan karaan xusuus, dhab ah, iyo tan ugu sarreysa, waayo -aragnimo badbaado leh naftooda iyo kuwa ay jecel yihiin. Booqdayaasha raadinaya goobo dhaxal oo aan la baadhin, waayo-aragnimo dhaqameed dhab ah, iyo qurux dabiici ah oo neefsata ayaa la yaabi doonta kuna farxi doonta inay ogaadaan soo dhaweynta diirran ee Sucuudiga. ”
Ku dhawaaqista dib -u -bilaabashada dalxiiska ayaa imaanaysa iyadoo Sacuudigu bilaabay ololihiisa xilliyeedka xagaaga ee 2021, isagoo dalka u keenaya waxyaabo badan oo soo jiidasho iyo dhacdooyin ah. Ololaha cusub ayaa la filayaa inuu ku soo biiro baahi weyn oo qarsoon oo ka dhex jirta dadka gudaha iyo kuwa gobolka, gaar ahaan munaasabadaha madadaalada ballaaran, kuwaas oo si weyn u saameeyay tallaabooyinka lagu xakameynayo faafitaanka coronavirus.
Dhismayaasha Jiddah iyo Waddooyinka Magaalada Jidda, Saudi Arabia
In kasta oo masiibada dhacday, 2020 wuxuu u ahaa sanad goos goos ah warshadaha dalxiiska gudaha ee Sacuudi Carabiya iyadoo muwaadiniinta iyo dadka deggan ay sahamiyeen waddanka - qaar badan markii ugu horreysay - oo awood u siineysa horumarka sii socda ee howlaha iyo alaabada cusub ka hor furitaanka caalamiga ah.
Ololaha Xagaaga 2020 ee Sucuudiga, oo socday intii u dhaxaysay Juun iyo Sebtembar, wuxuu soo kordhiyay 33% korodhka qarashka hoteellada, makhaayadaha, madadaalada iyo nashaadyada dhaqanka marka la barbar dhigo isla muddadaas 2019. Celcelis ahaan deggenaanshaha hoteelku wuxuu ahaa ku dhawaad ​​50%, iyadoo dadka ugu sarreeya meelaha qaarkood meelaha ku dhow 100%.
Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale soo bandhigtay dalxiiskii ugu horreeyey ee dalxiis ee dalxiiska ee xeebta Badda Cas markabka markabka ee Silver Spirit, bisha Sebtember 2020. Cruise waxaa mar kale la bixiyaa iyada oo qayb ka ah xilliga Xagaaga, iyada oo MSC Belissima uu ka hawlgalayo Jiddah inta u dhaxaysa July iyo September.
Tiro-koobyo dhammaystiran oo hab-maamuusyada caafimaadka iyo badbaadada ah iyo tijaabinta waddanka oo dhan loogu talagalay COVID-19 ayaa la hubiyay in kobaca dalxiiska uusan la socon koror ku saabsan kiisaska coronavirus. Sacuudi Carabiya waxay diiwaangelisay wax ka badan 14,700 xaaladood oo ah coronavirus hal milyan oo qof oo ku nool dadweynaha, oo ka hooseeya celceliska adduunka ee 25,153 xaaladood halkii milyan oo si weyn uga hooseeya meelo badan oo ka mid ah meelaha dalxiiska dhaqameed ee adduunka.
Sacuudi Carabiya waxay si guul leh ugu fidisay tallaalka COVID-19 dhammaan muwaadiniinta iyo dadka deggan, iyada oo in ka badan 25 milyan oo qiyaasood la qaatay 28-kii Luulyo. In ka badan kalabar dhammaan muwaadiniinta iyo dadka deggan Sacuudi Carabiya ayaa hadda la siiyay tallaalkii ugu horreeyay iyo mid haddii shan ay heleen laba qiyaasood oo tallaalka ah.
Dhammaan booqdayaasha waxaa la weydiin doonaa inay ilaaliyaan tallaabooyinka taxaddarka leh ee ay oggolaatay Wasaaradda Caafimaadka oo ay ka mid yihiin xirashada maaskaro dadweynaha dhexdiisa iyo joogtaynta fogeynta bulshada.
Muwaadiniinta ka soo jeeda 49 dal ayaa u qalma fiisaha dalxiiska, kaas oo lagu sugi karo Booqo website -ka Sacuudiga. Macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan shuruudaha gelitaanka, gaar ahaan waddamada leh coronavirus-ka cusub ee kala duwan, dadka safarka ah waa inay ka hubiyaan sidahooda ka hor inta aysan ballansan.